Esory ny lamina eto Madagasikara
Mianatra ny fomba hanesorana ny mombamomba ny sary
Miaraka amin'ny fisian'ny World Wide Web sy ny loharanom-pahalalana an-tserasera mitombo, serivisy an-tserasera maro no manome fitaovana hanampiana anao hanala ny mombamomba ny sary. Matetika dia sarotra ny mamaritra izay fitaovana hampiasana. Andeha hojerentsika ny sasany amin'izy ireo:
Arotsaho eto ny sary na kitiho ny sary kely raha te handefa sary fanampiny ao amin'ny solo-sainao. Ny karazan-drakitra dia tokony ho JPG, JPEG na PNG haben'ny sary: ​​farafahakeliny famahana sary: ​​5M teboka mora esory ny sary avy amin'ny sary miaraka amin'ny tsindry tsy misy. Azo alaina ao amin'ny rindrambaiko Adobe koa izy io, ho mora aminao.
Fitaovana tambajotra sosialy: Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter. Esory moramora ny sary avy amina sary mampiasa ireo fitaovana an-tserasera ireo. Mamela anao hijinja, hihodinkodina, hanova loko na hampifanaraka izy ireo, hanambatra sary maromaro ho iray sy maro hafa. Ny sisa ataonao dia misafidy ny background tianao ary tsindrio ny 'Share'. Raha manana kaonty media sosialy marobe ianao, dia azonao atao ny mampiasa an'io fitaovana io ho an'ny tsirairay.
Fanamoriana sary: ​​Ity fitaovana iray hafa ilaina hanalana ny fiaviany. Raha ny marina dia misy fitaovana maro isan-karazany hita ao amin'ny Internet manao izany. Ny tena ilaina indrindra amin'izy ireo dia ireo izay manao asa mitovy amin'ny sivana Photoshop. Noho izany, raha tokony hifaneraserana amin'ny faritra maizina na mangirana ianao dia afaka mampiasa ity fitaovana ity hanala haingana sy haingana ny toerana manodidina ny zavatra, ao anatin'izany ireo tianao indrindra. Mba hanatsarana azy io kokoa, ny sivana manamaivana dia azo ampiasaina hanitsiana ireo loko miloko amin'ny sary iray mba hahasarika azy ireo kokoa.
Fitaovana iray hafa mahasoa amin'ny fanesorana ny fiaviany dia ny fitaovana drafitra. Tena mety izany rehefa mila mamorona drafitra manodidina ny zavatra ianao, toy ny lavaka na faribolana ao anaty sary. Azonao atao koa ny manisy stencil, lamina ary gradien amin'ny sarinao hanatsarana ny endrik'izy ireo. Ny sasany amin'ireo stencil malaza dia misy gradient, block ary manasitrana.
Làlan'ny fametahana sary: ​​Ho an'ny valin'ny fanesorana ny sary tsara indrindra dia zava-dehibe ny fisafidianana ny fitaovana manolotra fitaovana kalitao. Fitaovana maimaim-poana maro no manolotra fiasa fototra fotsiny izay mety hanaporofo fa mora amin'ny fanesorana tsotra ny sisintany, lamina na tasy. Na izany aza, ny fitaovana aloa dia manolotra fitaovana sy fiasa mandroso izay hanampy anao hanala ireo sarotra kokoa amin'ny fanesorana ireo singa. Ohatra, azonao atao ny mampiasa fitaovana fanonganana sary nalaina mba hanalana ireo zavatra 3D toy ny hazo sy ny lakan-drano.
Iray amin'ireo rindrambaiko fanovana sary ilaina indrindra dia Paintbrush, izay manolotra fitaovana isan-karazany azonao ampiasaina amin'ny fanesorana ny sary. Amin'ny fampiasana an'ity rindrambaiko ity dia azonao atao ny manala ny sisin-tany, manatsara ny sary ary mamorona Stroke borosy manokana. Raha mila manala ny sary avy amin'ny sary misy loko maromaro na gradient ianao, dia azonao atao aza ny mampiasa Paintbrush hanambatra loko mialoha sy hampanjavozavo ny loko ambadika. Misy fitaovana maro hafa natolotry ny Paintbrush, izay manampy anao hanala ny fiaviany amin'ny fomba tsotra sy mahomby.
Ho fanesorana ambadika loko matevina, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny manokatra mpamoaka sary toa an'i Adobe Photoshop, Paintbrush na Illustrator ary manokatra sary amin'izany programa izany. Safidio ny loko marevaka na loko manasongadina ary ampiasao ny safidin'ny Strokes. Azonao atao ny manova ny lokon'ny afara amin'ny alàlan'ny fisafidianana Stroke vaovao na fanitsiana ny loko amin'ny paleta. Toy izany koa, raha mila manala ambadika fotsy ianao dia tokony hanokatra Photoshop, hanokatra sary ao amin'ny programa Paintbrush ary avy eo misafidy White Background.
Na izany aza, raha misafidy sary miloko marevaka ianao dia tsy maintsy manitsy ny famirapiratana sy mifanohitra amin'ny tanana raha mitahiry ilay sary. Azonao atao koa ny misintona fitaovana isan-karazany izay hanampy anao hanala ny lokon'ny loko matevina. Ireo fitaovana ireo dia hanampy anao hanaisotra ny saranga haingana sy mora amin'ny ankamaroan'ny loharano an-tserasera. Ny sasany amin'izy ireo dia asongadina amin'ny tranonkala etsy ambany:
Ho fanampin'izay, raha mampiasa sary tahiry an-tserasera ho an'ny orinasanao an-tserasera ianao, dia afaka mampiasa serivisy fanovana sary tsara toy ny Online Stock Img Tools hanalana ny fiaviany ara-potoana. Ity no fitaovana azonao ampiasaina amin'ny serivisy fanesorana ny mombamomba azy haingana sy mora. Ny Stock Stock Img Tool dia afaka mamonjy sy mamerina manome habe ny sary nefa tsy very ny kalitao tany am-boalohany na ny mazava. Raha ny marina, raha tsy azonao antoka ny valiny dia azonao atao ny mijery ireo sary santionany amin'ny Internet hahazoana hevitra tsara kokoa momba ny valiny farany.
Rehefa notehirizinao ilay sary dia mety angatahina ianao hampiditra anarana fisie vetivety mba hahitanao mora ilay sary raha vao manomboka mampiasa ilay rindrambaiko fanovana ianao. Ny dingana hanesorana ny mombamomba ny manodidina ny sary dia manomboka amin'ny fisafidianana ny fitaovana Mifindra, fisafidianana ny afara ary avy eo dia hisintona azy any amin'ny toerana tianao esorina. Mba hanesorana ny mombamomba ny sary iray dia azonao atao koa ny mampiasa ny fitaovana Mifindra sy milatsaka. Aorian'izany dia mila mahazo antoka ianao fa voavonjy ilay sary alohan'ny hitohizany.